हामी एक दशकमै समृद्ध हुन सक्छौ ः श्रेष्ठ « KhelkudNews.com
हामी एक दशकमै समृद्ध हुन सक्छौ ः श्रेष्ठ
Published On : 26 February, 2018 12:38 pm
बिनोद श्रेष्ठ , नेकपा एमालेका सल्लाहकार । मजदुर राजिनितीको पृष्ठभुमि बोकेका श्रेष्ठले विगतमा जीफन्टका कोशाध्यक्ष, महासचिव बरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको जिम्मेवारी पुरा गरि सकेका छन् । हाल उनी मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको अध्यक्ष छन् । तीनै श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ः
तपाइ मजदुर आन्दोलनको नेता कसरी खेलकुदमा लाग्नु भएको हो ?
म पहिले देखि नै खेलुकदमा सक्रिय थिए । भुमिगत कालमा हामीले श्रमिक स्पोर्ट्स क्लब गठन गरेर खेलकुद गतीबीधी सञ्चालन गरेका थियौ । यसबाटै हामीले श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने काम गर्ने गरेका थियौ ।
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको काम त प्राज्ञिक काम गर्ने र अध्ययनकै काम अघि बढाउने भन्ने थियो, त्यस भन्दा अन्यत्र बढी सक्रिय रहेको आरोप छनी ?
त्यसो होइन , हामीले एकडेमीले नै गर्ने काम अध्ययन र अनुसन्धानका कामलाई अघि नबढाएको होइन । तर,जसरी खेलकुद प्रतियोगिता र अन्य गतीबीधीको प्रचार प्रसार हुने गरेको छ, खेलकुदका अध्ययन सम्बन्धी कार्यको प्रचार प्रसार नभएकाले धेरैलाई यो भ्रम परेको हो ।
मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीलाइ त नेपाल खेलकुद महासंघमा नअटाएका पार्टीको एउटा गुटका ब्यक्तिको समुह भनीन्छ नी ?
त्यो लगाइने आरोप मात्र हो । एमालेको खेलकुद सम्बन्धी जनबर्गीय संगठन नेपाल खेलकुद महासंघ नै हो । हामा्र जनबर्गीय संगठन होइन । हामीले गुटगत गतीबीध पनि गरेका छैनौ । मदनभण्डारीको नामबाट स्थापना भएका कारण धेरैलाई एमालेको संगठन भएको लाग्न सक्छ । यो पार्टीको सग्.ठन होइन । नितान्त खेलकुद सम्बन्धी गतीबीधी सञ्चालन गर्न स्थापीत सस्था हो ।
स्थापनाको केही बर्षमा एकडेमीले खेलकुद महोत्सब पनि गर्ने गरेको थियो । जुन लोकप्रीय थिया्े, अहिले त्यो हराएको हो ?
हराएको होइन । स्वरुप फेरिएको हो । पहिले हामीले एउटै समयमा धेरै प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियो । आर्थीक कारणले पनि यो कठिन भयो । अहिले हामीले स्वरुप फेरेका छौ । काठमाडौमा क्रिकेटका कार्यक्रम ग¥यौ । बुटवलमा दौड र भलीबल आयोजना ग¥यौ । नवलपरासीमा भलीबल प्रतियोगिता आयोजना ग¥यौ । पाल्पामा दृष्टिबिहिनको प्रतियोगिता आयोजना ग¥यौ । यसले के देखाउछ भने हाम्रो सक्रियता बढ्दो छ । सक्रियताको स्वरुप फेरिएको हो ।
अहिले खेलकुद क्षेत्रमा राजनिती हाबी भएको छ भन्ने छनी साँचो हो ?
खेलकुद क्षेत्रमा राजनिती हुनु हुदेन भनेर हामीले खबरदारी गरेका छौ । तर, रोक्न कठिन हुने रहेछ । खेल क्षेत्र विज्ञहरुले चलाउने हो भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौ । राम्रा मान्छेलाई छाडेर हाम्रा मान्छे अगाल्ने परिपाटीले खेलकुदलाई तहस नहस पारेको साचो हो । खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा जो कोही अघि बढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु हाम्रो उद्धेश्य हो ।
अध्यक्षको रुपमा पहिले कार्यकाललाई कसरी लिनु भएको छ ?
सन्तुष्छ छौ । टिमले साथ दिएको छ । सोच बनाए अनुसार कति काम त भएन । किनक िबजेट अभावले नै हामीलार्इै समस्यामा पा¥यौ । स्वयसेवा भएका कारण सबै समयमा सबै साथीहरु जुट्न पनि कठिन हुने रहेछ । तथापी राम्रो प्रयास गरेका छौ । हामी यसमा सन्तुष्ट छौ ।
अन्त्यमा खेलकर्मीलाई केही भन्नु हुन्छकी ?
नेपालमा अब राजनितीक एजेन्डा सकिएको छ । अबको साझा एजेन्डा भनेको समृद्धीको एजेन्डा हो । समृद्धीका लागि खेलकुद महत्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ । खेलकुद र पर्यटनलाई अघि बढाए यसले देशको समृद्धीलाई पनि अघि बढाउन सकिन्छ । एक दशक यो क्षेत्रमा इमान्दारी पूर्वक लाग्ने हो भने हाम्रो भिन्नै परिचय र चिनारी हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ।
“पूर्वाधार निर्माण गरी खेलकुदको विकास गर्ने” −मन्त्री राजीव गुरुङ
गण्डकी प्रदेशभित्रका गाउँमा खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार खेलमैदान निर्माण गरी खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै खेलकुदको विकास गर्ने
आठ वर्षीय स्यालोनको सफलता
अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको ओसीयन सिटीमा सम्पन्न ओसीयन सिटी क्लासिक मार्सल आर्त च्याम्पियनसिपमा २०२१ मा नेपालका ८ वर्षीय